Ịgagharị Mbara Igwe System na wezụga na na eBook by Nam Nguyen - 1230000416238 | Rakuten Kobo
#293 in Nonfiction, Science & Nature, Science, Physics, Astronomy
#200 in Nonfiction, Science & Nature, Science, Physics, Cosmology
Exploring the Solar System and Beyond in Igbo
Ịgagharị Mbara Igwe System na wezụga mgbaru ọsọ bụ mejupụta uche gị na isi mmalite ka maara mmepe nke Planetary sayensị nke oge a Ohere Age na a ebook. The ebook dị mfe iji, nwee ume ọhụrụ na-meela ya n'ezie n'ezie na-atọ ụtọ! Ị pụrụ ịgụ a ebook na-enweghị ihe ọ bụla tupu ihe ọmụma nke anyị Mbara Igwe System n'oge gara aga ihe. Ọtụtụ ihe ga-na a ebook dị ka, anyị Sun, anyị Mbara Igwe System, Gịnị bụ ala ?, Gịnị bụ Big Bang? Mbara ala nke anyị Mbara Igwe System, Mercury, Venus, Ụwa, Ụwa Ọnwa, Naa Asteroids, Meteors na Meteorites, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Dwarf mbara ala, Comets, Kuiper eriri na Oort ígwé ojii, 1000 Ohere-mbara igwe Okwu Dictionary na ọtụtụ ọtụtụ ọzọ!
Ịgagharị Mbara Igwe System na wezụga ga-enyere gị ebe ọ bụla ị na-aga; ọ bụ ngwa na mfe akwụkwọ na ngwá ọrụ nke ga-ewe gị Lekwasị usoro mbara igwe!
M kweere na ngagharị anyị usoro mbara igwe bụ otu n'ime mmadụ kasị ukwuu na nkà mmụta sayensị rụzuru na na ịghọta mmepe nke Planetary sayensị nke oge a Ohere Age dị mkpa.
Dị nnọọ echeta otu ihe na mmụta mgbe na-akwụsị! Gụọ, Gụọ, Gụọ! Na Dee, Dee, Dee!
A na-ekele gị ka m dị ebube nwunye Bet (Griffo) Nguyen & m ịtụnanya ụmụ Taylor Nguyen na Ashton Nguyen niile ịhụnanya ha na nkwado, na-enweghị mmetụta uche ha nkwado na enyemaka, onye ọ bụla n'ime ndị a mmụta asụsụ eBooks na audios ga-ekwe omume.